Water Project | အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း
ကမ္ဘောဇဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အနာဂတ်အလင်းတန်း မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ကိုဝင်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသများရှိ ပြည်သူများ၏ ဘ၀၊ ပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အတွက် အထူးစီမံချက်များ ချမှတ်ကာ Water Project စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် ချမှတ်ခဲ့သော တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ပြန်လည်ထူထောင်မှု လမ်းညွှန်ချက် အရ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာပြည့်စုံသော ပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဟူသော လမ်းညွှန်ချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘောဇအနာဂတ် အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း၏ Water Project စီမံကိန်းကြီးသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၇.၂) မီလီယံကျော် အကုန်အကျခံပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်း၊ ကယားပြည်နယ်၊ မန္တလေးဒေသကြီးနှင့် နေပြည်တော်မြို့များရှိ မြို့ရွာများတွင် စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ပေးခဲ့ကာ ရေကောင်းရေသန့်များ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် နွေရာသီကာလတွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများသည် ရေရှားပါး ပြတ်လပ်သည့် ဒုက္ခ တွေ့ကြုံခံစားနေခဲ့ရသည်။ ထိုဒေသရှိ ပြည်သူများသည် အိမ်သုံးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုရန် သဘာဝမိုးရေမှ သော်လည်းကောင်း၊ နေအိမ်မှ နှစ်နာရီကျော်ကြာ သွားရောက် ခပ်ယူရသည့် ရေကန်ငယ်မှသော် လည်းကောင်း၊ ရေကိုခက်ခဲစွာ ခပ်ယူအသုံးပြုကြရ၏။ ထိုသို့ ရေရှားပါးမှု ပြဿနာသည် ဒေသရှိ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဒေသစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ကြီးမားသော ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၏ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ် မူတည်လျှက် ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြစ်သော ကြက်သွန်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ လက်ဖက်နှင့် အခြားဒေသထွက် ကောက်ပဲသီးနှံ များစွာတို့သည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသမှ အဓိကထွက်ရှိ၏။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ Water Project မတိုင်မီ ကာလကတည်းက ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်း မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း သည် နေ့စဉ် ရေဂါလံ (၅၀၀၀) အား၊ ထိုရေရှားပါးသည့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသများရှိ ဒေသခံပြည်သူများ ထံသို့အရောက် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သော်လည်း တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ရေ (၅) ဂါလံထက် ပို၍ မရခဲ့သဖြင့် လုံလောက်မှုမရှိခဲ့ပေ။ ထိုသို့သောအခြေအနေနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုပြဿနာအား အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးလိုခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေမည့် Water Project စီမံကိန်းကြီးအား ကမ္ဘောဇမိသားစု၏ စိတ်စေတနာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အမြန်ဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် ကမ္ဘောဇအနာဂတ် အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ Water Project စီမံကိန်းကြီးမှ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက် (၃) ခုဖြစ်သည့် စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်း၊ တိမ်ကောနေသည့် ရေကန်နှင့်ဆည်များ ပြန်လည် တူးဖော်ပေးခြင်း၊ နွေရာသီ ရေရှားပါး ဒေသများအရောက် ရေသယ်ယာဉ်များဖြင့် ရေဖြန့်ဝေပေးခြင်း အစရှိသည်များကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ယခုအခါ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ၏ ရေချိုထွက်ရှိနိုင်မှု အလားအလာ နည်းပါသည်ဟု သုံးသပ်ထားခဲ့သည့် ဒေသများတွင် ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်း မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ နေ့စဉ် ၂၄ နာရီ ဂျင်နရေတာ မောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ် ပေးထားသည့် စက်ရေတွင်း စုစုပေါင်း(၇၅)တွင်း တူးဖော် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ရေတိုင် (၂၆၂) တိုင်၊ ရေလှောင်ကန် (၉၆) ကန်ပါဝင်သော ဤစက်ရေတွင်းများမှ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် နေပြည်တော်တို့ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူ စုစုပေါင်း (၁၃၈၉၆၈) သောက်သုံးရေချို လုံလောက်စွာ သောက်သုံးနိုင်ပြီစြဖ်ပါသည်။ ဤ Water Project စီမံကိန်းကြီး၏ အောင်မြင်မှုသည် ယခုအခါ ဒေသခံပြည်သူများဖြစ်သည့် ဓနု၊ ကောင်ရိုး၊ ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ယင်း၊ လီဆူး၊ ကယမ်း၊ ကယားနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့နှင့်တကွ ထိုဒေသများရှိ စာသင်ကျောင်း (၄၉)ကျောင်း၊ ဆေးရုံ (၁၁) ရုံ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၆၀)၊ မီးသတ်ဋ္ဌာန (၁၂)ဋ္ဌာနနှင့် ကျေးရွာ (၇၅) ရွာတို့အား ကျယ်ပျံ့စွာ အကျိုးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဇအနာဂတ် အလင်းတန်း မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရေဖြန့်ဝေမှုစနစ်သည် ရွာလယ်မှ အစပြုကာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များနှင့်တကွ တောင်ပေါ်ရှိ ကလေးများ၏ စာသင်ကျောင်းပါမကျန်၊ မီးသတ်ဌာန၊ ဆေးရုံများအထိနှင့် အိမ်တိုင်းရှိ ပြည်သူတိုင်းသန့်ရှင်းသော သောက်ရေအား ထိရောက်ကျယ်ပျံ့စွာ ဖြန့်ဝေပေးသည့် စနစ်ဖြင့် စီမံဆောင်ရွက် ပေးထားသည်။
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဋ္ဌာန၏ အ၀ီစိစက်ရေတွင်း တူးဖော်စက် (၆) စီးပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ခဲ့ရာမှ၊ ယခုအခါ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံထုတ် အ၀ီစိစက်ရေတွင်း တူးဖော်စက် အသစ်(၁) စီး ၀ယ်ယူ၍ ကျောက်တုံးများ၊ ထုံးကျောက်များ၊ ရွှံနွံများ၊ မြေစေးများ၊ မြေအောက်ကျောက်ဆောင် ကျောက်သားများ၊ ကျောက်ဂူများဖြင့် လွှမ်းခြုံနေသည့်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရေချိုကိန်းအောင်းနိုင်သည့် နေရာမှန်သမျှ၌ စက်ရေတွင်းများ လိုက်လံ တူးဖော်ခြင်းဖြင့် Water Project စီမံကိန်းမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းသည့် ချမှတ်ထားသည့် စီမံကိန်းအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့အပြား ရေရှားပါးသည့် ဒေသများအရောက်အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိရောက်ကျယ်ပျံ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အခြား ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းကြီးများဖြစ်သည့် ကျော်သူ ပရဟိတကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့် Eleven Media တို့နှင့် လက်တွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အချို့၌ စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်နိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေး ကမကထ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ ပရဟိတအဖွဲ့များနှင့် ကွန်ယက်ခြိ်တ်ဆက်လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ Water Project စီမံကိန်းကြီး၏ နယ်ပယ်ကို ပိုမိုချဲ့ထွင်လာနိုင်သည်အပြင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများရှိ ရေအလွန်ရှားပါးသည့်နေရာများအတွက် ထိရောက်သော လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျော်သူပရဟိတကွန်ယက်မှ ယခုအခါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့၌ စက်ရေတွင်း စုစုပေါင်း (၂၂) တွင်း တူးဖော်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိ ရေရှားပါး ဒေသများ၌ ဒေသခံများ ရေလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်သန်၍ ကမ္ဘောဇအနာဂတ် အလင်းတန်း မြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် မန်ကျည်းရွှေကူကန်ကြီးအား ပြန်လည် ဆယ်ယူ ပေးခဲ့သည်။ ဤကန်ကြီး ဆယ်ယူပြီးစီးပါက ရေဂါလံစုစုပေါင်း (၁၄) သန်း သိုလှောင်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အနီးအနားရှိ ကျေးရွာ (၅) ရွာ ရေလုံလောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ကမ္ဘောဇအနာဂတ် အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် တိမ်ကောနေသည့် ရေကန် (၅) ကန်နှင့် ဆည် (၂) ဆည်ကို ပြန်လည်ဆည်ယူ တူးဖော်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အယ်နီညိုရာသီဥတု ကျရောက်ခဲ့သဖြင့် နေရာအတော်များများတွင် ပူပြင်းခြောက်သွေ့ဒဏ်ခံခဲ့ရကာ၊ ရေရှားပါးပြတ်လတ်မှုပြဿနာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသ၌ ရေရှားပါးမှု ကြုံတွေ့စဉ် ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရေရှားပါးဒေသများ အရောက် ရေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရေသယ်ယာဉ် အသစ်(၄၃) စီး ၀ယ်ယူကာ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲများမှ တဆင့် ရေဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ .
ရေသယ်ယာဉ် တစ်စီးလျှင် ရေဂါလံ (၃၀၀၀) သယ်ယူနိုင်ပြီး၊ အိမ်ထောင်စု (၃၀၀) ခန့်သို့ ရေပေးဝေနိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲများမှ မန်နေဂျာများ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရေရှားပါး ဒေသအသီးသီးသို့ ရေသယ်ယာဉ်များဖြင့် နေ့စဉ် ရေဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ စတင်၍ ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရေရှားပါး ဒေသများသို့ ရေသယ်ယာဉ် (၅)စီးဖြင့် ရေဖြန့်ဝေပေးခဲ့ရာ၊ ဟဲဟိုး၊ တောင်ကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ ညောင်ရွှေ၊ တွံတေးမြို့များ၌ ၊ စုစုပေါင်း ရေဂါလံ (၁,၃၀၉,၆၉၀) ဂါလံအား၊ လူဦးရေ (၁၅၄,၇၅၅) ယောက်သို့ ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြန့်ဝေပေးရခြင်းဖြင့် ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် အဆိုပါဒေသများ၌ စက်ရေတွင်းများ မတူးဖော်ပေးနိုင်မီ ကာလအကြား၊ ဒေသခံများ လွယ်ကူစွာ ရေရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း၏ Water Project စီမံကိန်းကြီးသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေမည့် စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်အတွင်း ဒေသများ၌ ရေရှားပါးမှု ပြဿနာ မဖယ်ရှားနိုင်သမျှကာလပတ်လုံး မရပ်နားပဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် စီမံကိန်း ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းသည် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမှုဝန်းကျင်အတွက် အခြေခံကျ၍ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ရေရှည်အကျိုးပြုနိုင်စေမည့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ Water Project စီမံကိန်းကြီးကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းသည် ဒေသ အတွက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်သော ထိရောက်သည့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘော်ဆိုင်းမြို့မှ ကျောင်းသူလေး သည် အိမ်သုံးရန်အတွက် ယခင်ကဲ့သို့ အချိန်နှစ်နာရီမျှပေးကာ ဝေးလံသည့်နေရာအထိ သွားရောက်ရေခပ်ရန် မလိုတော့ဘဲ၊ ကမ္ဘောဇအနာဂတ် အလင်းတန်း မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ တူးဖော်ပေးထားသည့် စက်ရေတွင်းအနီး ရေဘုံဘိုင်၌ လွယ်လင့်တကူ အချိန်ကုန်လူမပမ်းပဲ သွားရောက် ရေခပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ဒေသခံပြည်သူများ အားကိုး အားထားပြုနေရသော ဒေသကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း၊ ယခင် ရေရှားပါးချိန် သန့်ရှင်းသည့်ရေ အသုံးမပြုနိုင်သဖြင့် ၀မ်းလျှော ၀မ်းပျက် ၀မ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း၊အမျိုးသမီးများ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သည့် ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ မီးဖွားချိန် မွေးလမ်းကြောင်း သန့်ရှင်းရေး မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်အရေပြား၌ ယားနာများဖြစ်ခြင်းတို့အား၊ ယခုအခါ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သဖြင့်၊ ဒေသကျန်းမာရေးအတွက် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ Water Project သည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျရောက်နိုင်သည့် ရောဂါများအား ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
The regional people in the Southern Shan State praised the Water Project and commended it as “More Precious and Rare than Gold”.
ထိုသို့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း Water Project စီမံကိန်းကြီး၏ အောင်မြင်မှုအပေါ် ဒေသခံပြည်သူများမှ “ရွှေ” ထက်ရှားသော “ရေ” လှိုင်လှိုင် ထွက်ရှိပြီဟုပင် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ပြောစမှတ်ပြုကြပါသည်။
တောင်သာမြို့၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွင်တစ်နာရီ ရေဂါလံ(၅၀၀၀) နှုန်း ထွက်ရှိသည့် စက်ရေတွင်းရေအောင်
ကလောမြို့နယ်၊ ​ဟဲဟိုး မြက်ဆက်ဖါးအောက်တောရဓမ္မရိပ်သာတွင်​ တူးဖေါ်ပေးသော စက်​​ရေတွင်း​ရေ​အောင်
(BFM) မှ တောင်သာမြို့တွင် တူးဖော်လှူဒါန်းသော(၇)တွင်းမြောက် စက်ရေတွင်းရေအောင်
စစ်ကိုင်းမြို့၊ အမှတ်(၃)ရဲလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် (BFM)က စက်ရေတွင်းအောင်မြင်စွာတူးဖေါ်